Ubani UPrincess Anne? UK lucky kule nkosi ethile. She - indodakazi kuphela edumile futhi ohlonishwa eBritish Queen Elizabeth II. Igama eliphelele inkosazana - Anne Elizaveta Alisa noLouise. Kulesi sihloko sizoxoxa ngalo muntu ezithakazelisayo, iqhaza layo ezindabeni zombuso, nokuphila kwansuku zonke.
UPrincess Anne (United Kingdom) wazalelwa e-London ngo-August 15, 1950 futhi waba ingane uQueen Elizabeth II nelesibili uMbusi Edinburgh Philip. Njengoba ukuzalwa kwaso inkosazana besezindaweni yesithathu endleleni eya esihlalweni sobukhosi ngemva unina nomfowabo, manje endaweni yeshumi nambili. Royal Princess isihloko unikelwa kuphela indodakazi endala ekuhlaleni kwenkosi esihlalweni sobukhosi, kuba Anna isihloko Princess of Great Britain, iwine ngo-1987, lapho kucaca ukuthi izohlala indodakazi kuphela umndeni.
Ngo-September 1963, ngokuhambisana nemithetho kumiswa ka Buckingham Palace, Anna abaneminyaka engu-13 wathunyelwa esikoleni ofunda uhlala kuso. Ngo-1960 ngasekupheleni, esemncane, u-Anna waqala ukuba bafeze imisebenzi yabo yasobala. It sabhala ukuthi kweminyaka eyi 17-19 wathola mayelana 500 izimemo ngonyaka UPrincess Anne. UK kuze kube manje yaziwa lungu enamandla asebukhosini.
ukuphila Siqu nezingane
Indoda yokuqala Princess - uCaptain Mark Phillips. Wayengumuntu equestrians umsubathi iqhaza imincintiswano eminingi, ngisho 1972, waba ingqwele yama-Olympic. Kuyinto ngenxa yezemidlalo Mark Phillips wahlangana no-Anna. Iqiniso liwukuthi ngo-1971, wenza emcimbini, wathatha kuphela endaweni yesihlanu, ngesikhathi uMarku okwakufika kuqala. Ngemva nje mncintiswano kwakukhona ngandlebenye ukuthi inkosazana futhi Phillips indaba yaqala. Abameleli asebukhosini ngokushesha inqatshelwe lezi inzwabethi. Kodwa kakade 1973 ku lonke UK yamemezela ukuzibandakanya kwabo. Phillips akakuthandanga asebukhosini, bangichazela lokhu ngokuthi 'wayengumuntu engacabangeki ezinodaka kakhulu. " Ngo-1992, lo mbhangqwana behlukana ngemva kokuhlala ndawonye iminyaka engaphezu kwengu-18.
Ngo-1991, lo thisha art wenza isitatimende esithi ngokuthi yayinesimo indodakazi ngu Phillips, yavela ngemva ebusuku zabo ndawonye ehhotela ngo-1984. Ukuhlolwa kwe-DNA waqinisekisa ubuyise Phillips.
Ushadile Anna nginezingane ezimbili - umfana nentombazane uPetru Zara.
Mnumzane Timoti Lourens - umyeni inkosazana British wesibili, abantwana ndawonye ngazimbili khona.
Anna, inkosazana yase-Great Britain, umfana othanda ihhashi ogibele, njalo ligcwaliswe. Phakathi impumelelo yayo esemqoka - indawo yokuqala European Championship Awe-Eventing 1971 (ngamanye ngezigaba), kanye indawo yesithathu kwi-ngabanye kanye umcimbi ngamunye ngo-1975. Ngaphezu kwalokho, UPrincess Anne - amalungu asebukhosini kuphela nengxenye zokuhlonipha iMidlalo Yama-Olympic ngo-1976, okuyinto eyenzeka ngo-Montreal. Kwaphela iminyaka eminingana yena umelwe Okwezwe Federation I--Equestrian Ezemidlalo.
Ngokushesha ngemva esikoleni boarding waqala umsebenzi wakhe umphakathi. Wahlangana nosopolitiki, izinhloko ezifundazweni ezihlukahlukene, nezikhulu zikahulumeni kanye nabanye, kanye ukuhlanganyela emikhosini ebalulekile, imikhosi kanye nezinye izenzakalo. Yize noma yazama emihlanganweni ozidingayo ukuze isimo, kuzo zonke izimo kuba - maximalist futhi kakhulu asebenzayo yobudala bakhe. + Abathandwayo, kodwa cishe ukwedlula wonke amanye amalungu asebukhosini kwaba eRussia. Princess wavakashela kabili eU.SSR kathathu Russian Federation. Ngo-2000, wahlangana Putin, futhi ngo-2014 kwafika ku Sochi nge bemidlalo ngokusemthethweni emelela esimweni sazo.
Anna, inkosazana yase-Great Britain, ogama Umlando womuntu ophilako egcwele izenzakalo elikhanyayo, kwake cishe wathunjwa. Kwathi ngo-March 20 kuyi-ezikude 1974, eduze wakubo Buckingham Palace. Kusihlwa, inkosazana nomyeni wakhe uMarku umshayeli ushayela Limousine esigodlweni. Ngemuva kwabo ukhwele emshinini kakhulu uvelile ngaphambi Limousine bavala Yiqiniso akhe aqhubekayo. Lowo okonile ephuma emotweni yakhe waqala ukudubula ngesikhathi Limo Anna. Isela zilimaze inkosazana unogada, umshayeli, futhi waya ukusiza amaphoyisa. Kungazelelwe, ngemuva imoto he sekukhona intatheli Brayan Makkonnel, owaqala ukuba sithonye osonile ukuyeka isibhamu. Intathelizindaba wazama ukuthatha uhlangothi isela, kodwa waqhumisa ku Brian futhi wanyamalala.
Ian Ball - neselelesi wafuna thwala abasha UPrincess Anne ngomhlatjelo. Ngesikhathi secala, kamuva wabizwa ngokuthi omunye kwakwakhiwa kakhulu kwekhulu, eneminyaka engu-26 kuphela ubudala. Ngakusasa uMnu Ball ngokushesha alethwe phambi kwejaji. Ngokushesha kwaba sobala ukuthi le nsizwa uphazamisekile emqondweni.
UPrincess Anne (UK) - a kakhulu nomuntu omuhle. Eminyakeni yalo 65, ke ingenye abesifazane abaningi asebenzayo futhi ngizikhandle Buckingham Palace ukuthi bamake wakhe eseyinsizwa. Anna namuhla olufundisa nomzukulu wakhe futhi wahlanganyela ekwenzeni imisebenzi yakhe yasobala.
Udokotela Abesilisa: indlela ukusho, futhi nini zimbiza?